Dr. Kunle Olajide "Waxaan cabsi ka qabaa qeybo ka mid ah Nigeria in ay noqoto Soomaaliyadii 2-aad" | YoobsanNews.com
Saxafi xarig ku muteystay markii uu baraha bulshada ku weeraray Madaxweynaha
Jaaliyadda Soomaalida Talyaaniga oo ka horyimid magacaabis uu sameeyey safiirka
Muxuu ku saleysan yahay khilaafka ka dhex curtay hogaamiyaha Ahlu sunna-da [G/dhexe] iyo RW Khayre.?
Legos-Nigeria [Yoobsannews Online] Dr. Kunle Olajide oo xoghaye guud ka ah golaha odayaasha Yoruba ee dalka Nigeria, ayaa muujiyey cabsida uu ka qabo in amni xumada ku soo korodheysa qeybo ka mid ah dalka Nigeria in ay horseedo in Nigeria ay noqoto Soomaaliyadii 2-aad.
“Xaaladda halkan ka taagan waxeey u muuqata mid welwel badan nagu abuureyso, waxgarad ahaan waxaa inoo muuqata Nigeria in ay dhiig-baxeyso, markii hore annaga oo la daala-dhaceynay weerarada Boka-haram hadda waxaa ku soo darsaday kooxda dadka rayidka ah gumaada [herdsmen] iyo shufto hubeysan” Ayuu yiri Dr. Kunle Olajide.
Soomaaliya, ayaa noqotay dal ay tusaalooyinka xun xun ee colaadaha, argagixisada & amni xumada u soo qaadataan shaqsiyaad kala duwan oo ay ku jiraan madaxweynayaal, iyada oo aysan muuqan ififaalo lagaga dabaaqtamayo magac xumida dhabarka loo saarayo Soomaalida.
Previous: Duqa Garoowe & wefdi uu horkacayo oo la kulmay jaaliyada Soomaalida Nederlands [Sawirro]
Next: Bandits,herdsmen may turn Nigeria to another Somalia -Olajide, YCE scribe
Xildhibaan Fiqi “Guddiga Dib u heshiisiinta Galmudug lagu sheegay marka laga reebo dhowr qofood, intooda badan….”
Shirkadii sameysay barnaamijka [FaceApp] oo iska bari-yeeshay eedeyn ku saabsan in ay u dhacaan xogta gaarka ah